အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်းမီတာ - မြန်နှုန်းစမ်းသပ် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အင်တာနက်က Apps ကပ » အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်းမီတာ - မြန်နှုန်းစမ်းသပ်ခြင်း
အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်းမီတာ - မြန်နှုန်းစမ်းသပ်ခြင်း APK ကို
အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်းမီတာ display တွေအင်တာနက်မြန်နှုန်းနဲ့ app နှုန်းဒေတာအသုံးပြုမှုနေထိုင်ကြသည်။အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်းမီတာ Lite ကို
သင့်ရဲ့အင်တာနက်မြန်နှုန်းပြ status bar (ဒေါင်းလုပ် / upload) တွင်ပြသခြင်းနှင့်အကြောင်းကြားစာ pane ထဲကကိုအသုံးပြုကြသည်အချက်အလက်များ၏ပမာဏကိုပြသထားတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ device ကိုသုံးနေစဉ်အချိန်မရွေးကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုစောင့်ကြည့်ဖို့ကူညီပေးသည်။
အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်းမြှင့်ခြင်းနှင့် Optimizer သင့်ရဲ့ wifi သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းကွန်ရက်အင်တာနက်ကလက်ရှိမြန်နှုန်းမြင်မကြာမီသင့်ရဲ့ device ကိုနောက်ဆုံးတော့ web site ကို load လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်နှေးလျှင်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းပါပဲ။ အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်းမီတာ, အမြန်နှုန်းစမ်းသပ် & မော်နီတာအင်တာနက်။
အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်းမီတာ / ဒေတာအသုံးပြုမှုစောင့်ကြည့်ရေး(မြန်နှုန်းစမ်းသပ် & အင်တာနက်စောင့်ကြည့်), သင့်ရဲ့ wifi စစ်ဆေး app ကိုတစ်ဦးလျှင်အသုံးပြုသော 3G, 4G နှင့်မိုဘိုင်းဒေတာဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်းမီတာ 2018 display တွေအင်တာနက်အမြန်နှုန်း, ဝိုင်ဖိုင်မြန်နှုန်းနဲ့ app Per ဖို့ဒေတာအသုံးပြုမှုနေထိုင်ပါ။ မီတာအတိအကျရက်စွဲနှင့်ကန့်သတ်နှင့်အတူငွေတောင်းခံသံသရာ Set အဖြစ် speed စမ်းသပ်မီတာ.
ဒေတာကိုညှစ်နိုင်ပြီးသင့်ရဲ့ဘရော့ဘန်းမြန်နှုန်းအတိုင်းလိုက်နာသို့မဟုတ်တိုင်းတာမရကြပါလျှင်အမြန်နှုန်းယဇျပူဇျောနိုင်ကြပါတယ်။ နှင့် Network ကိုမြန်နှုန်းစမ်းသပ်သို့သော်လည်း, အလွန်အမင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ App ကိုသင်ဘရော့ဘန်းမြန်နှုန်း Checker ကိုအသုံးပြုခြင်းစေခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်သတိပေးချက် panel ကိုအပေါ်အမြန်နှုန်းကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်!
အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်း 2018, တစျခုကိုထိပုတ်ပါမြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုအရဖြစ်နိုင်စေသည် အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်းစမ်းသပ်ခြင်း 20 စက္ကန့်အတွင်းဖြစ်ပေါ်။ ဒါကြောင့်သင်ကဲ့သို့မကြာမီသင်လိုချင်သောအဖြစ် Wi-Fi Speed ​​ကိုစမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်ရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Speedcheck Pro ကို အစာရှောင်ရာအင်တာနက်မြန်နှုန်းမီတာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရုံတစျခုကိုထိပုတ်ပါအတွက်မြန်နှုန်းကိုစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။
- ပြ status bar နဲ့အကြောင်းကြားစာအတွက်ရီးရဲလ်အချိန်မြန်နှုန်း update ကို။
- အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်းမီတာသို့မဟုတ်ဒေတာများ Monitor သို့မဟုတ် Bandwidth ု့ကပ်ရေးသို့မဟုတ်အမြန်နှုန်းစမ်းသပ်တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ခြင်းနှင့်လွှတ်တင်ခြင်းမြန်နှုန်း
- GPRS, 3G, 4G နှင့် Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုအပေါ်အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်းညွှန်ပြချက်ဆောင်ရွက်ချက်များတိကျစွာအားလုံးကွန်ယက်ကိုမြန်နှုန်း။ အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်း Optimizer ။
- မိုဘိုင်းကွန်ယက်များနှင့် Wi-Fi ကွန်ရက်များအတွက်သီးခြား stats ။
- နောက်ဆုံးအ 30 ရက်အတွင်းသင်၏အသွားအလာဒေတာစောင့်ကြည့်။
- ရိုးရှင်းသော Speedcheck, လွယ်ကူသောအစာရှောင်ခြင်းနှင့်တိကျမှန်ကန်အင်တာနက်မြန်နှုန်းစမ်းသပ်ဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်းစာဖတ်သူကိုသင့်ရဲ့အင်တာနက်မြန်နှုန်းအင်တာနက်မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုများတွင်ပြသပါ။
- စာမေးပွဲအင်တာနက်မြန်နှုန်း kb, အင်တာနက်မြန်နှုန်း Lite, အင်တာနက်မြန်နှုန်းအကြောင်းကြားစာဘား kbps
အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်း 4g မြန်ဆန်သောကွန်ယက်ကို download check လုပ်ထားနှင့်မြန်နှုန်း ping, signal ကိုခွန်အားကွန်ယက်ကိုအမည်, ပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပ IP ကိုနှင့်စမ်းသပ်မှုရက်စွဲကို upload လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
- ကွန်ယက်ကိုအမျိုးအစားအားလုံးကို (3G, 4G & LTE ကို, Wi-Fi) နဲ့အလုပ်လုပ်
- ရိုးရှင်းသောအလိုလိုသိဒီဇိုင်းနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူ UI ကို။
- အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်းမီတာဒေတာအသုံးပြုမှုကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်မှတ်, Monitor သူတစ်ဦးမှာ Data Manager ကဖြစ်ပါတယ်။
- 24 ×7တရားဝင်ပံ့ပိုးမှု။
SpeedTest-ကအင်တာနက်မြန်နှုန်းမီတာ, သတိပေးချက်သင်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှသာပုံပေါ်ပါတယ်။ သငျသညျအကြောင်းကြားစာ၏ဦးစားပေးပြောင်းလဲနိုင်သည်။
4g မြန်မြန်နှုန်း Browser ကိုစမ်းသပ်ခြင်း အင်တာနက်စစျဆေးဖို့အမြန်ဆုံး, စမတ်နှင့်ဘက်ထရီအကျိုးရှိစွာလမ်း (ဒေတာများ) အသုံးပြုမှုဖြစ်ပါတယ်။
အသိပေးချက်များကိုလျှောက်လွှာ display ကိုလက်ရှိမှာတော့ "အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်း", မရရှိနိုင်မိုဘိုင်းဒေတာ (ပုံမှန်အားဖြင့်လစဉ်ဒေတာအစီအစဉ် 1024MB ဖြစ်ပါတယ်), ယနေ့၏မိုဘိုင်းဒေတာအသုံးပြုမှုနှင့်ယနေ့ wifi ဒေတာအသုံးပြုမှု။ တွင် အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်းစမ်းသပ်ခြင်း လျှောက်လွှာရှိရရှိနိုင်မိုဘိုင်းဒေတာကိုပြခြင်းနှင့်နေ့စဉ်ဒေတာအသုံးပြုမှုအကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
SpeedTest - အင်တာနက်မြန်နှုန်းမီတာ။
keywords: - အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်းမီတာ, အင်တာနက်မြန်နှုန်းစမ်းသပ်ခြင်း, မြန်နှုန်းစမ်းသပ်ခြင်း, အခမဲ့အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်း, 4g မြန်မြန်နှုန်း Browser ကိုစမ်းသပ်ခြင်း, အမြင့်မြန်နှုန်းကိုအင်တာနက်။
bug fixed, လျော့နည်းကြော်ငြာတွေအများကြီးပိုမြန်။
အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်းမီတာ Pro ကို - မြန်နှုန်းစမ်းသပ်ခြင်း
3.66 ကို MB
ဗီဒီယို Player ကို
ဘာသာပြန်သူအားလုံး - ဘာသာစကားများကိုပြောဆို။ ဘာသာပြန်ပါ